प्रचण्डले बाबुरामलाइ फकाउँदै भनेः सम्मान दिदा आउनुहुन्छ त? – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > प्रचण्डले बाबुरामलाइ फकाउँदै भनेः सम्मान दिदा आउनुहुन्छ त?
काठमाडौं : नेपाल कमयुनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डल’ले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई एकतामा आउन आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रदेश कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरुलाई पार्टी एकतामा आउन आग्रह गरेका हुन्। उनले नयाँ बनाउँछु भनेर हिडेका भट्टराईको पीएचडी (बौद्धिकता)ले अन्यत्र सकारात्म परिणाम दिन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
उनले मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी र नारायणमान बिजुक्छेलाई पनि एकता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेका छन् । नेताहरुले सम्मान दिन तयार रहेको भन्दै उनले भने, ‘कसरी सम्झाउने होला भनेर चिन्त लागेको छ। उहाँहरुले पनि भनिदिनुपर्यो, के सम्मान गर्यो भने आउनुहुन्छ ?’
समाजवादी पार्टी छाडेर नेकपा प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरलाई प्रचण्डले प्रार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
सपनामा चोर आएको देखेपछि विपनामा १०० मा कल गरेर प्रहरी बोलाएपछि यस्तो!
जनताको मन नदुखाउँनेगरी काम गर्छुः नवनिर्वाचित विद्या भट्टराई
विदेश उड्न लागेका चार सय कामदारको हवाई टिकट यसरी भयो रद्द